- Ngu-Thea van der Westhuizen no-Wise Sambo
I-COVID-19 iletha inselelo emkhakheni wezemfundo ephakeme ngokwezinga elingafaniswa nokuqhamuka nendlela yokufundisa ehambisana nobuchwepheshe. Yingakho kungamangalisi ukuthi isisombululo sincike, ikakhulukazi, ekuzinikeleni komkhakha wezemfundo ephakeme kwezokufunda nokufundisa kusetshenziswa ubuchwepheshe.
Izimpawu zikhomba ukuthi wonke amanyuvesi aseNingizimu Afrika kufanele ayeke izindlela ezindala zokufundisa ukuze iqoqo labafundi bangonyaka wezi-2020 lizoqeda unyaka wokufunda. Kepha kunezinto ezimbalwa, njengezindleko ze-data, ukungejwayeleki ukuxhumana ngobuchwepheshe ngokufundwayo, nezinto ezithinta isimo senhlalo nesomnotho ezenza ukuthi kube nzima kubafundisi nezitshudeni ukuthi bangene shi.
Umbuzo esithangamini sokucobelelana ngolwazi esisanda kuba khona ubuthi: Ingabe sesikulungele ukufundisa ezamabhizinisi ngobuchwepheshe?
I-Entrepreneurship Development in Higher Education (i-EDHE), inhlangano engaphansi kwe-Community of Practice (i-CoP) Entrepreneurship Development in Academia ye-Universities South Africa (i-USAf) ibinomhlangano wokucobelelana ngolwazi ku-Zoom ngaphansi kwesihloko esithi: Sharing Practice to Move Online with Entrepreneurship Teaching Methods and Student Experiences.
Kulesi sithangami bekukhona abantu abangama-108 bemele amanyuvesi aseNingizimu Afrika angama-17, kwathi akade bekhona bathola ithuba lokucobelelana nokuqhamuka namasu amasha okubhekana nesimo senhlalo nesomnotho sezwe.
Umxhumanisi kazwelonke uDkt Thea van der Westhuizen, uthe lesi sigcawu sokucobelelana bekungesokuqala ebesihlelelwe, sethanyelwa yizinkumbi zabantu abafundisa ngezamabhizinisi emanyuvesi emazingeni ehlukene okusebenza kwabo.
IPhini leSekelashansela lezokuFundisa nokuFunda, uSolwazi Sandile Songca, nePhini LeSekelashansela lwezoCwaningo, ezamaBhizinisi nokuQamba, uSolwazi Deresh Ramjugernath babhunge ‘ngendaba ephelele" yokuthi isikhungo sithuthele ebuchwephesheni.
USongca no-Ramjugernath bakhulume ngezimo ezintathu ezibhekene ne-UKZN ngenxa ye-COVID-19:
1. Abafundi bangakwazi ukubuyela endleleni ejwayelekile (bafunde emagcekeni eNyuvesi) ngemva kwezinsuku ezingama-35 zomgonqo (mhla zingama-30 kuMbasa wezi-2020).
2. Abafundi ngeke bakwazi ukubuyela mhla zingama-30 kuMbasa (noma nini ngaphambi komhla zi-4 kuNhlaba wezi-2020), okungaba uNhlangulana, uNtulikazi noma uNcwaba ngaphambi kokuthi kubuyelwe emakilasini.
3. Izitshudeni zingakwazi ukubuyela emagcekeni eNyuvesi ngemva komhla wesi-3 kuNcwaba wezi-2020 noma zingakwazi nhlobo ngonyaka wezi-2020.
U-Ramjugernath uthe kuyaphoqa ukufunda ngobuchwepheshe nokuthi ikusasa lamanyuvesi ezweni lonke kuncike kukona. Ubalule izingqinamba ezinkulu kuloku, njengokucikizela kwe-internet nokungakwazi kwabafundi baseNingizimu Afrika nabakwamanye amazwe ukusebenzisa ukuchwepheshe ngokufanele.
U-Ramjugernath uqhubeke wabalula ukuthi abafundi abaningi bavela emakhaya antulayo, okwenza kungabi lula ukufundela emakhaya futhi eziningi zazo azinawo ugesi. Uphakamise loku okulandelayo:
1. Ucwaningo oluphuthumayo olubheka ukuthi i-internet ifinyelela kuziphi izindawo eNingizimu Afrika;
2. Ucwaningo ngabafundi abangakwazi ukuthola izinto zobuchwepheshe; kanye
3. Nocwaningo oluzoveza inani labafundi abangahlinzekwa ngemfundo uma isikhungo sithuthela ekufundiseni ngobuchwepheshe ngokugcwele.
U-Ramjugernath uthe ukholwa wukuthi izikhungo ezinjenge-UKZN zinazo izimfanelo zokuthuthela ebuchwephesheni ngokugcwele kodwa izingqinamba ezinkulu ukuthola i-internet kubafundi nengqalasizinda kamasipala. Uthe indlela eyodwa yokuthi kuqedwe uhlelo lwemfundo lonyaka wangowezi-2020 isimo sesibili nesesithathu (ezibalulwe ngenhla) ukuthi kufundwe ngobuchwepheshe ngokugcwele.
UMdidiyeli woPhiko lwase-Doornfontein eMnyangweni wezokuPhathwa kwamaBhizinisi e-University of Johannesburg, uSolwazi Shepherd Dhilwayo, ubeke ngeso lokuba wumdidiyeli wophiko ekudidiyeleni iqoqo lezifundo ekufundiseni ngobuchwepheshe. Iqhinga likaDhilwayo wukufaka izingxenye zezamabhizinisi ezifundweni eziningi ezingezona ezamabhizinisi njengezobunjiniyela nezesayensi yezempilo.
Ubalule ukuthi ngemva kokubheduka kwe-COVID-19, umNyango wezokuPhathwa kwamaBhizinisi wakwazi ukuqhubeka nezindlela zokufundisa nokufunda usebenzisa izindlela zobuchwepheshe. Into eyayibanga ixhala kwakungukuthi ingabe izigaba zezifundo zazizokwazi yini ukushintshelwa endleleni yokufunda exubile ngokushesha kanti kubonakala ukuthi abafundisi ababanga nezingqinamba ezinkulu ukufaka izifundo ezinkundleni zobuchwepheshe.
Uphethe ngokuthi kungaba nesidingo sokubuyekeza izingxenye zezifundo ezidinga ukwenziwa ngezandla lapho izitshudeni kufanele khona zibone ngamehlo loko okufundwayo, zenziwe indlela yokufundisa ewukungathekisa.
USolwazi Richard Shambare wase-University of the Western Cape uthe kwaba nezingqinamba eziningi namathuba amaningi kwizitshudeni ezenza iziqu zokuqala ukufundisa ezamabhizinisi.
Sesifikile isikhathi sokuthi abafundisi bezamabhizinisi babuyekeze isilabhasi ihambisane nobucwepheshe. U-Shambare uthe isilabhasi enjalo izoza nezixazululo ezinkingeni ngokwenhlalo nezemnotho, ilethe izixazululo ezinkingeni ezikhona ngemva kwe-COVID-19.
Ubona indlela entsha njengethuba elihle kubafundi bezifundo zezamabhizinisi ukuthi bacije izingqondo zabo kwezamabhizinisi, babuyekeze ukuthi bangawasebenzisa kanjani amathuba kwezamabhizinisi, ikakhulukazi ukufunda ngobuchwepheshe.
U-Shambare ugcizelele ukuthi abafundisi bezamabhizinisi ngeke besaqhubeka nomqondo wokuthi ‘bangosiyazi’ kodwa kufanele babambisane nezinye izifundiswa zemikhakha ehlukene nezikhungo zemfundo ezehlukene, zibambisane nendima ezimele yezimboni nongoti bayo.
‘Inselelo yabafundisi bezamabhizinisi manje ukubona izidingo nokuthi zingahleleka kanjani lezo zidingo nokuthi zingawuthuthukisa kanjani umnotho waseNingizimu Afrika. Ubuhle bezamabhizinisi bayizolo ngeke busasebenza namuhla.’
U-van der Westhuizen uphethe ingxoxo ngokuphakamisa ukuthi izikhungo zemfundo ephakeme, umkhakha wamabhizinisi namazinga ehlukene kahulumeni kudingeka ukuthi baqinise amaxhama okubambisana ngezinto nangolwazi. Ukuvuselela imiphakathi kuyodinga indlela ephusile enamandla lapho yonke imikhakha nezimboni kubambisene khona.
• Le ngxoxo ingabukwa ku: https://youtu.be/xyGe8uiZ4OA.
U-Dr Thea van der Westhuizen ungumfundisi eSikoleni sezokuPhatha, ezobuChwepheshe nezokuLawula. UnguMgqugquzeli kaZwelonke we-Community of Practice: Entrepreneurship development in academia ye-EDHE.
U-Wise Sambo ufundisa e-UNISA. UnguMgqugquzeli kaZwelonke we-Community of Practice: Entrepreneurship development in academia ye-EDHE.